Rating: SKU: 5173-46-6. Category: ndị ọzọ na-
Tren bụ ihe siri ike na-abụghị nke methylated ma nwee ike imetụta ọbara mgbali elu, ụkpụrụ lipid, ọkwa cholesterol ma tinye nsogbu na usoro endocrine. Otu ihu ala nke Tren bụ ikike nke progestin na-emetụta gyno ma ọ bụ njụ ọkụ nke gyno dị ugbu a. A na-atụ aro ka ị na-agba P-5-P na okirikiri na kalama a tụrụ aro ya. Onye ọrụ nke na-enwu ọkụ kwesịrị ime ka usoro ọgwụgwọ ahụ dị na nso 150-250mg.
Mgbe ọ dị n'ime ahụ, Estra-4, 9-diene-3, 17-dione mezigharịrị Trenbolone. Trenbolone bụ steroid nke nwere ike anabolic, nke na-ejikọta ndị nabatara ya na anụ ahụ ọmụmụ, akwara na abụba. Trenbolone na-ebelata nitrogen excretion site na mmebi anụ ahụ (mgbochi catabolic). Onu ogugu nke anabolic (muscle muscle) na-emetụta ihe na-eme ka androgenic (virilizing) bụ ntụpọ nkịtị nke steroid ndị anabolic. Trenbolone nwere oke anabolic ruru. Akụkụ anabolic nke Testosterone bụ 100, mana oke Trenbolone bụ 500.
“You'll ga-enweta ike na oke, enwereghị m mmetụta na-emetụta ya, enwetara m ụfọdụ abụba (mana nke ahụ bụ ihe nri 6000 ga-eme). Ọ ga-emetụta ọbara mgbali, na-enweta ụfọdụ okirikiri nkwado / okirikiri aka na ma eleghị anya tinye ụfọdụ mmezi hawthorn beri. Agbabara m izu isii na 6/100/100/100/100/150, aga m anọ na 150mg ”